PC ပေါ်တွင်ပွတ်ဆွဲရန်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ် ၈ ခု - Emulator.online ▷🥇
PC ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဆလိုက်ရှိုး software 8
ဆလိုက်ရှိုးပြုလုပ်သူလိုအပ်သူမည်သူမဆိုကွန်ပျူတာသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် (သို့) အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဘရောင်ဇာတွင်သုံးရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ စာသား၊ တေးဂီတ၊ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြင့်တင်ဆက်မှုများကိုဖန်တီးရန်သင့်အားကိရိယာများရှိပါသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများအတွက်, သူတို့ကိုအလှဆင်ဖို့ဒီအမျိုးအစား applications များအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ပင်မလိုအပ်ပေ။ ထွက်ခွာသည်!
1 ။ Prezi
တက်ကြွသောတင်ဆက်မှုများကိုဖန်တီးလိုသူများအတွက် Prezi သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆလိုက်များသည်စမတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်ပြီးချဲ့ကားချဲ့သည်။ သင်အပြည့်အဝတည်းဖြတ်နိုင်သောအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောတင်းပလိတ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်၊ ထိုတွင်သင်ဂရပ်ဖစ်များ၊ YouTube ဗီဒီယိုများနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုထည့်နိုင်သည်။
အခမဲ့အစီအစဉ် (Basic) သည် ၀ န်ဆောင်မှု၏အခြားအသုံးပြုသူများမြင်နိုင်သောစီမံကိန်း ၅ ခုကိုပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏အလုပ်ကိုအွန်လိုင်းမှတည်းဖြတ်ရန်အခြားလူများအားသင်ဖိတ်နိုင်သည်။
Prezi (အခမဲ့၊ ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ): Web
2 ။ PowerPoint
ဆလိုက်ရှိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ PowerPoint သည်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်များစွာသောတင်းပလိတ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်ကာတွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ အခြားဒြပ်စင်များအကြားဗွီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ တေးဂီတ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ စားပွဲများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည်ဇာတ်ကြောင်းများအပါအ ၀ င်၊ တင်ဆက်မှု၏ဖန်သားပြင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းရေတွက်နိုင်သည်။ တင်ဆက်သူများသာမြင်နိုင်သောမှတ်စုများကိုယူပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ရုံးသုံး suite ထဲရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုသုံးပြီးသူများအတွက်အလွန်အလိုလိုသိသည်။
PowerPoint (ငွေပေးချေ): Windows | macOS
အွန်လိုင်း PowerPoint (အခမဲ့၊ ငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ) Web
3 ။ Zoho ပြရန်
Zoho Show သည်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်နှင့် PowerPoint နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ထို ၀ န်ဆောင်မှုသည် Microsoft application နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာများကို pptx တွင်ဖွင့ ်၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းကငွေပေးစရာမလိုဘဲလူ ၅ ယောက်အထိအတူတည်းဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်။
အလွယ်တကူရောနှောနိုင်သည့်ဆလိုက်တင်းပလိတ်များနှင့် themes များစွာကိုပေးထားသည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ GIFs နှင့်ဗွီဒီယိုများ (PC သို့မဟုတ် YouTube မှ) ထည့်။ တွစ်တာနှင့် SoundCloud ကဲ့သို့သောအခြားဆိုဒ်များမှလင့်ခ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အကူးအပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ကိရိယာများလည်းရှိသည်။
Zoho ပြရန် (အခမဲ့၊ ငွေပေးချေသောအစီအစဉ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်) - ဝဘ်
၄။ Google တင်ပြချက်များ
Google Slides (သို့မဟုတ် Google Slides) သည် Drive အထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်နှင့်စကရင်၏ညာဘက်အခြမ်းရှိအခင်းအကျင်းရွေးစရာများကိုပေးထားသည်။ Template editing လုပ်ဆောင်ချက်များသည် toolbar ပေါ်တွင်မီးမောင်းထိုးပြသည်။
စီမံကိန်းကိုလူအများအပြားကတစ်ချိန်တည်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ ဖန်တီးသူသည် link သို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားမှုများကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကဓာတ်ပုံ၊ အသံ၊ စားပွဲ၊ ဂရပ်၊ ပုံ၊ ရလဒ်ကိုအခြားပုံစံများအကြားအွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ် pptx, PDF, JPEG ဖြင့်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
Google တင်ပြချက်များ (အခမဲ့၊ ငွေပေးချေသောအစီအစဉ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ): ဝက်ဘ်
Apple ထုတ်ကုန်များ၏တင်ပြချက်များအတွက်မူရင်းပရိုဂရမ်၊ Keynote သည်အချိန်ဖြုန်းချင်သောသူများအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်တင်းပလိတ်အများအပြားရှိသည်။ အကူးအပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိနေသေးသည်။ သင်သည်စာသားကိုအရိပ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြပြီးပုံသဏ္shာန်နှင့်ပုံများစသည့်အရာဝတ္ထုများ၏လမ်းကြောင်းကိုဆွဲချနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည်အခြားအရာများအနက်မှဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ တေးဂီတများကိုထည့်နိုင်သည်။ iCloud ပေါင်းစည်းမှုကိုဖွင့်ထားပါကသူတို့သည် Windows ကိုသုံးနေလျှင်ပင်အခြားလူများနှင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ဒီ application က pptx ပရောဂျက်တွေကိုဖတ်ပြီး Microsoft software format နဲ့သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခြေခံကျ (အခမဲ့): macOS
ယေဘူယျအားဖြင့်တင်ဆက်မှုလျှောက်လွှာများကိုမသိဘဲလှပသောဆလိုက်များကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးစုံဖြင့်တင်းပလိတ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ အထူးပြုစာရင်းများ၊ ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်စကားစုများ၊ အချိန်ဇယားနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည့်ဆလိုက်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသုံးပြီးတခြားသူတွေကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံများ၊ GIF များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အော်ဒီယိုများအပြင်အပြန်အလှန်ဂရပ်ဖစ်များကိုလည်းသင်ထည့်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာကအခမဲ့ version ကို ၀ န်ဆောင်မှု၏အခြားအသုံးပြုသူများရရှိနိုင်ပါသည်။
စိတ်ချရတဲ့ (အခမဲ့၊ ငွေပေးချေသောအစီအစဉ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ): ဝက်ဘ်
၇။ Ice Cream Slideshow Maker
Icecream Slideshow Maker သည် PC ပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးအော့ဖ်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂီတဖြင့်ဓာတ်ပုံပြသခြင်းကိုဖန်တီးရန်ထိုအပလီကေးရှင်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည်။
သို့သော်စာသားပါအကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးတွင်ဆလိုက်တစ်ခုစီသို့မဟုတ်တူညီသောသီချင်းအတွက်ကွဲပြားသောအသံများကိုသုံးနိုင်သည်။ အခမဲ့ဗားရှင်းသည်ရလဒ်အား Webm သို့သာသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုပြီးတင်ဆက်မှုတစ်ခုစီအတွက်ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံကိုကန့်သတ်ထားသည်။
ရေခဲမုန့်ဆလိုက်ရှိုးပြုလုပ်သူ (အကန့်အသတ်ရှိသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်အခမဲ့) Windows
၁၀။ Adobe Spark
Adobe Spark သည်အလိုအလျောက်တင်ပြသည့်ကိရိယာကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းအယ်ဒီတာဖြစ်သည်။ အခင်းအကျင်းရွေးချယ်မှုများအပြင်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင် နှိပ်၍ နှိပ်နိုင်သောဆလိုက်ဒီဇိုင်းများလည်းရှိသည်။ ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို၊ စာသား၊ တေးဂီတကိုသင်ထည့်နိုင်ပြီးသင်၏အသံကိုပင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
ပုံတစ်ပုံချင်းစီ၏ကြာချိန်ကိုညာဘက်အောက်ထောင့်တွင်အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လက်များစွာဖန်တီးလိုပါက link ကိုမျှဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်လိုချင်သူမည်သူမဆိုကိုဖိတ်နိုင်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုခြင်း (သို့) ဗွီဒီယို format (MP4) ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ အခမဲ့ဗားရှင်းတွင် Adobe Spark လိုဂိုပါဝင်သည်။
Adobe က Spark (အခမဲ့, ဒါပေမယ့်အစီအစဉ်များကိုပေးဆောင်ခဲ့သည်): Web ကို
အောက်ပါအကြံပြုချက်များသည် TED အတွက် UX ခေါင်းဆောင်တိုတို၊ အကြောင်းအရာစုံညီညီလာခံစီမံကိန်းအာရွန်ဝိုင်ယန်းဘတ်မှဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းအရာကို TEDBlog ကိုယ်နှိုက်မှာရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ထွက်စစ်ဆေးပါ။
ဆလိုက်များကိုသင်၏တင်ဆက်မှုကို အခြေခံ၍ မှတ်စုရေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်မယူမှတ်ပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကိုအများပြည်သူအတွက်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအမြင်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သောအမြင်အာရုံဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
စာသားများများလွန်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။ Weyenberg ၏အဆိုအရ၎င်းသည်စာဖတ်သူအားစာဖတ်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းတို့ရှိမရှိမသိသူများ၏အာရုံကိုခွဲဝေပေးသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါကအကြောင်းအရာကိုအကြောင်းအရာများသို့ဖြန့်ဝေပြီးတစ်ကြိမ်ချင်းပြပါ။
တင်ဆက်မှုတလျှောက်အရောင်တန်ချိန်များ၊ ဖောင့်အမျိုးအစားများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားပါ။
3. ဆိုးကျိုးများ overdo မထားပါနဲ့
အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုလည်းမသုံးပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူအတွက်ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်ရွေးချယ်စရာများကသူတို့၏တင်ဆက်မှုသည်အလွန်ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မည်၊ ထိုချဲ့ကားပြောဆိုမှုများသည်ပရိသတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှလွတ်မြောက်စေမည်ဟုထင်မြင်စေသည်။
၄။ ဗီဒီယိုများတွင် autoplay ကိုမသုံးပါနှင့်
အချို့သောတင်ဆက်မှုပရိုဂရမ်များသည်သင်ဆလိုက်ဖွင့်သည်နှင့်ချက်ချင်းဗွီဒီယိုများကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Weyenberg ကရှင်းပြသည်မှာဖိုင်သည်ကစားရန်အချိန်များစွာကြာပြီးတင်ပြသူသည် pin ကိုနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်၍ စမ်း။ ကြိုးစားရန်စတင်သည်ဟုရှင်းပြသည်။
ရလဒ် - နောက်ဆလိုက်သည်မကြာမီပေါ်လာမည်။ ဤတားမြစ်ချက်အမျိုးအစားများကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ Self- မျိုးပွား.
သင်၏မိုဘိုင်းမှဓါတ်ပုံများနှင့်တေးဂီတများဖြင့်ဗွီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်အခမဲ့ application များ
ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘဲ PowerPoint မှာနဖူးစည်းစာတမ်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ